मदन लम्साल | गृहपृष्ठ | Page 4
के नेपाल गरीब छ ?
ठूला–ठालू छोराछोरी पढाउनदेखि औषधि उपचार गर्नसम्म विदेश जान सक्ने भएका छन् । अब त प्रोफेशनलहरू समेत बाह्य पर्यटनमा योगदान पुर्‍याउनेगरी छुट्टी मनाउन बेलाबेला विदेश जान सक्ने भएका छन् ।	बिस्तृतमा
अघिल्लो साता नेपाल–भारत थिङ्क ट्याङ्क समिट सम्पन्न भयो । थिङ्क ट्याङ्क मतलव विचारै–विचारले भरिएको ट्याङ्की । अर्को शब्दमा यसलाई बुद्धिजीवी पनि भनिन्छ । बुद्धिजीवी भनेको बुद्धि बेचेर जीविका गर्ने व्यक्ति हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । खुशीको कुरा त यो छ कि, समिटले अबदेखि देशमा बुद्धिजीवीहरूको भूमिका जोडदार रूपमा बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अब भने देशले ठूलै प्रगति गर्ने भो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेन । त्यसो त नेउवा महासङ्घ, सीएनआई जस्ता व...	बिस्तृतमा
नेपाली जनता साह्रै गनगने रैछन् । जहिले पनि सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन, विदेशीले यो दिएन त्यो दिएन भनेर गुनासोमाथि गुनासो मात्र गरिरहन्छन् । आफ्नो घरअघिको फोहोरको थुप्रो पनि सरकारले नै उठाइदेओस् भन्ठान्छन् । आफ्ना वरिपरि बिगे्रको बाटो पनि सरकारले नै बनाइदेओस् भन्ठान्छन् । आफू तथा आफ्ना सन्तानलाई रोजगारी पनि सरकारले नै देओस् भन्ठान्छन् । नपाए सरकारलाई नानाथरी गाली गरिरहन्छन् । जे कुरा पनि सकारले नै गर्देओस् भन्छन् र सधैं पाएनौं मात्र भनिरहन्छन् । आ...	बिस्तृतमा
जब जब आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ, तब तब सरकारले अबौं अर्ब रुपैयाँ बालुवामा खन्याउँछ । केही अर्थात् मार्सी चामलका भात खानेहरु ‘गुड फिल’ गर्छन् । मार्सी खान नपाउनेहरु जिल पर्छन् । सामान्यजन के बुझ्दैनन् भने बालुवामा तरलता नहाल्ने हो भने असार साउनमा जमीन भिज्छ कसरी ? जमीन नभिजे रोपाइँ हुन्छ कसरी ? असार साउनतिर केही मानिस हिलोमा रोपाइँ गर्छन् । उनीहरुलाई त्यसो गर्न नेता र कर्मचारीहरुले सघाउँछन् । त्यस सहयोगबापत उनीहरुले धान र धन्यवाद प्राप्त गर्छन् ।...	बिस्तृतमा
देश जलमग्न छ । ट्रिपर आतङ्क, बाढी, पहिरो, यातायातमा सिण्डिकेटले जन्माएको पीडा आदिले देश शोकमग्न छ । तर, सरकार पनि त्यत्तिकै बसेको छैन । सरकारी कर्मचारीेहरु काममा ब्यस्त छन् । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई बेलाबेलामा काम गर्न आदेश पनि दिइरहन्छन् । मन्त्रीहरुलाई मात्र होइन, विगतमा छरिएर रहेका अहिले प्रम कार्यालयमातहतमा ल्याइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण, सुशासन प्रवद्र्धनलगायत दर्जनौं कार्यालयका सबै हाकिमलाई पनि प्रमले राम्रो काम गर्न निर्देशन दिइसकेका छ...	बिस्तृतमा
सरकारका सफलतै सफलता
मन्त्रीहरुले जनता र देशका खातिर यतिविघ्न काम गरिरहेका छन्, तर जनताले भने कताकता त्यो अनुभूत गर्न पाएनन्जस्तो छ । फुर्सद धेरै भएर होला मान्छेहरु काम गरेन भन्दै सरकारकोे विरोध मात्र गरिरहन्छन् । अरुको विरोध गरे हुन्छ, तर दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको विरोध गर्न त पाइँदैन नि । अनशन गर्ने, विरोधका कार्यक्रम गर्ने भए कि जुम्ला जानु, कि ओलाङ्चुङगोला जानु, कि सरकारले तोकिदिएको ठाउँमा बसेर गर्नु । किनकि यो त समाजवादउन्मुख सरकार पो हो त । यस्तो सरकारसँग मुखमु...	बिस्तृतमा
सपना देख्न नि नपाउनु !
पछिल्लो चुनावपछि म त एकाएक सम्राट् (राजाहरुको पनि राजा) भएछु । जहाँ जाऊँ उतै जयजयकार, फूलमाला, अबिर । वरिपरि जीहजुरी गर्नेहरुको भीड । असीमित अधिकारले सम्पन्न । मेरा ढोके, बैठके पनि तलब भत्ता, विदेश भ्रमणका नाममा थुप्रै कमाउने । म त यसै सम्राट् । मेरा आसेपासेका भाञ्जा, साला, सालीसमेत सबै मालदार अड्डाहरुमा फिट । सेवानिवृत्त भएपछि पनि जागीरेसरह थुप्रै सुविधा । पैसा, पावर र मानसम्मानको कुनै कमी छैन । हाछ्यूँ आए पनि सिङ्गापुर, बैङ्कक, भारत, अमेरिका उप...	बिस्तृतमा
हाम्रा पर्धानमन्त्री साह्रै बाठा पो छन् त । उनी रेल ल्याउन चाइना गा’छन् । ७ वर्षपछि आउँछ रे चीनबाट रेल । रेल अर्थात् समृद्धि । अघिल्लो महिना उनी पानीजहाज ल्याउन भारत गा’थे । पानीजहाज याने विकास । पानीजहाज कहाँसम्म र कहिलेसम्म आइपुग्ने हो, हिसाबकिताब हुँदै होला । कुनै दिन जहाज र रेल आउलान् पनि । तर, तिनले विकास र समृद्धि चैं बोकेर ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन्, हेर्न खूब रहर लागेको छ । दक्षिणबाट दक्षिण र पश्चिमका सामान, उत्तरबाट चीनका सामान आउलान् । तर...	बिस्तृतमा